News - Civen na-akpọ gị òkù ka ị bịa ihe ngosi (PCIM Europe2019)
Ọla kọpa akpọchiela
Electrolytic ọla kọpa foil
Civen na-akpọ gị òkù ka ị bịa ihe ngosi (PCIM Europe2019)
Ihe gbasara PCIM Europe2019
Ụlọ ọrụ eletriki eletrik na-ezukọ na Nuremberg kemgbe 1979. Ihe ngosi na ogbako bụ onye na-eduga n'elu ikpo okwu nke mba ụwa na-egosi ngwaahịa, isiokwu na ọnọdụ na ngwá electronic na ngwa. N'ebe a, ị nwere ike ịhụ nkọwa nke eziokwu na ọnụ ọgụgụ kachasị mkpa na mmemme a.
The PCIM Europe bụ ndị na-eduga mba ngosi na ogbako maka ike electronics na ngwa ya. Nke a bụ ebe ndị ọkachamara sitere na ụlọ ọrụ na agụmakwụkwọ na-ezukọ, ebe a na-egosi ọha na eze usoro ọhụrụ na mmepe ọhụrụ maka oge mbụ. N'ụzọ dị otú a, ihe omume ahụ na-egosipụta ihe niile bara uru - site na akụrụngwa, na-achịkwa njikwa na nkwakọ ngwaahịa ruo na usoro ọgụgụ isi ikpeazụ.
Profaịlụ ndị ọbịa
Ndị ọbịa azụmaahịa mba ụwa bụ ndị ọkachamara na ndị na-eme mkpebi sitere na njikwa, ngwaahịa na imepụta sistemu, ịzụrụ yana ngalaba njikwa R&D. Dị ka ihe ngosi pụrụ iche nke ukwuu, PCIM Europe dị iche site na ikuku na-arụ ọrụ kpụ ọkụ n'ọnụ. Ndị ọbịa na-aga ihe ngosi ahụ iji kwurịta nsogbu ụfọdụ na ụzọ onye ọ bụla na-aga na ngosi ngosi, na-amalite mkpebi ntinye ego ozugbo na saịtị. 76% nke ndị ọbịa si mba ofesi sitere na Europe, 19% sitere na Eshia na 5% sitere na America.
PCIM (Ngbanwe ike na ngagharị ọgụgụ isi) bụ isi nzụkọ Europe maka ndị ọkachamara na ngwa eletrọnịkị na ngwa ya na mmegharị ọgụgụ isi na ịdị mma ike.
Civen gara PCIM ọtụtụ ugboro, anyị na-eje ozi ndị ahịa si n'ụwa nile, ọtụtụ n'ime ha aghọwo enyi anyị .Anyị nwere ike zuru ezu igbo mkpa nke etiti na elu klas ahịa n'agbanyeghị na arụpụtaghị ma ọ bụ arụmọrụ.
Na ike ego ndabere na akụ uru nke nne na nna company.Civen bụ ike nọgidere na-mma anyị ngwaahịa ka imeghari ọzọ, na ndị ọzọ iwe ahịa asọmpi.
Ị ga-ahụ anyị n'ụlọ nzukọ 7, ụlọ ntu 7-526 agin.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịga na ngosi ahụ, biko nye m ozi na: sales@civen.cn
Ụbọchị: Mee 7 ruo 9, 2019
Tinye: Ụlọ ihe ngosi Nuremberg
Oge nzipu: Jul-08-2021
CIVEN Metal bụ ụlọ ọrụ ọkachamara na nyocha, mmepe, mmepụta na nkesa nke ihe ọla dị elu